Semalt विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्: Google कसरी धेरै विज्ञापनहरू सहित साइट ह्यान्डल गर्छ?
गुगल एक नाम हो जुन हामी सबैसँग परिचित छौं। एक वेबसाइट मालिक को रूप मा, गुगल मूलतः तपाइँ कसरी एक वेबसाइट बनाउने र चलाउने दिशानिर्देश सेट गर्दछ। यहाँ, हामी वेबसाइट प्रबन्धकको रूपमा हामीले विचार गर्न सक्ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारकको बारेमा छलफल गर्नेछौं। त्यस्तै गुगलले वेबसाइटको साथ धेरै विज्ञापनहरूसँग कसरी व्यवहार गर्दछ।
सामग्री पदोन्नति कुनै पनि वेबसाइट मार्केटि strategy रणनीतिको अगाडि हो। यसको कारणले गर्दा, त्यहाँ पर्याप्त विज्ञापनहरू प्रदर्शन हुनका लागि पर्खिरहेका छन्, त्यसोभए के हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो साइटमा धेरै विज्ञापनहरू सुविधा दिनुहुन्छ भने?
त्यहाँ असंख्य कारकहरू छन् जसले गुगलले कसरी व्यवहार गर्दछ वा साइटसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ भन्ने प्रभाव पार्दछ जससँग धेरै विज्ञापनहरू छन्। गुगलबाट जोन मुलरले हामीलाई सहि दिशामा औंल्याउँछ कसरी धेरै विज्ञापनहरूको साथ साइटहरू ह्यान्डल गरिन्छ जब यो SERP मा रैंकिंगको कुरा आउँछ।
यो मुद्दा डिसेम्बर ११ मा गुगल खोजी केन्द्रीय प्रत्यक्ष स्ट्रिममा सम्बोधन गरिएको थियो, र जोन मुलरले केहि प्रकाश साझा गरे किनकि उनले वर्णन गरे कि त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन निर्धारण गर्दछ कि धेरै विज्ञापनहरूको साथ साइटहरू कसरी खोजी गरिन्छ जब खोज परिणामहरूको लागि अनुक्रमित हुँदैछ। उनी भन्छन् कि वेबसाइटहरू SERP बाट हटाउन सकिन्छ जब उनीहरू अत्यन्त दुर्लभ सर्तहरू पूरा गर्दछन्, तर यस्तो बिरलै हुन्छ।
मुलरले यो बुझाउँदै अगाडि वर्णन गर्दछ कि किन गुगलले SERP मा केही साइटहरू राख्न छनौट गर्दछ यदि यसले स्पष्ट रूपमा वेबमास्टर दिशानिर्देशहरूलाई उल्ल .्घन गरिरहेको छ। यहाँ उनले के भन्नु परेको थियो।
मुलरको अनुसार धेरै विज्ञापनहरू सहित साइटहरूमा के हुन्छ
कुनै पनि खराब उदाहरणहरू तटस्थ रहन र साइट नराख्न, मुलर कुनै विशेष साइटको ह्यान्डलिंगसँग कुरा गर्न असमर्थ थियो र कुनै उदाहरण बनाएन। यसको सट्टामा, उनले गूगलले कसरी अधिक औसत प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ साइटहरू ह्यान्डल गर्दछन् भन्ने बारेमा बढी कुरा गरे।
उसले केहि अल्गोरिदम अपडेटहरू उल्लेख गर्दछ जसले मूल्या poor्कन गर्दछ कि कसरी गरीब प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ साइटहरू वर्गीकृत गरिन्छ:
पृष्ठ लेआउट एल्गोरिथ्म: यो एल्गोरिथ्म २०१२ मा सुरू गरिएको थियो, र यसले फोल्डरलाई धेरै विज्ञापनहरूको साथमा प्रभाव गर्दछ।
पृष्ठ गति एल्गोरिथ्म: यसले प्रभाव पार्छ साइटहरू जुन धेरै विज्ञापनका परिणामको रूपमा बिस्तारै लोड हुन्छ। यो २०१ in मा सुरू भयो।
कोर वेब भिटालहरू: यो एल्गोरिथ्मले विशेष रूपमा वेबसाइटहरूलाई लक्षित गर्दछ जुन इष्टतम प्रयोगकर्ता अनुभव भन्दा कम छ। यो मे २०२१ मा सुरू हुन्छ।
मुलरले थप वर्णन गर्दछ कि उदाहरण प्रयोग नगरीकन यसलाई बुझाउन गाह्रो छ, तर प्रयोगकर्ताको अनुभवमा विज्ञापनको प्रभावलाई ध्यानमा राखी धेरै चीजहरू विचार गरिन्छ। केही वर्ष पहिले, त्यहाँ एक अपडेट थियो जहाँ माथिको फोल्डर सामग्री केहि भयो जुन अलि गम्भीर रूपमा तौल गरिएको थियो।
त्यसोभए त्यो त्यहाँ छ यदि त्यहाँ धेरै विज्ञापन सामग्रीहरू छन् भने, प्रयोगकर्ताको अनुभव सम्भवतः प्रभावित हुन्छ। विगतमा विमोचन गरिएका अन्य अन्य अद्यावधिकहरू पनि छन् जुन वेबसाइटको गतिलाई महत्वपूर्ण रैंकिंग कारकको रूपमा हेर्दछन्।
मुख्य वेब भिटेलहरू मेमा प्रक्षेपण गर्न सेट गरिएको छ, जसले एसईआरपीमा क्रमबद्ध गर्न पनि सहयोग गर्दछ।
के गरीब उपयोगकर्ता अनुभवको साथ पृष्ठहरू अझै पनि क्रमबद्ध गर्न सक्छन्?
यस विन्दूमा, यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि पृष्ठमा धेरै विज्ञापनहरू हुनुको प्राथमिक नोक्सान यो हो कि यसले यूएक्सलाई असर गर्छ। मुलरले बुझाउँदछ कि खराब प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ पृष्ठहरूले श्रेणीकरण गर्न सक्दछ जब तिनीहरूले विशेष प्रश्नहरूको लागि अत्यन्त सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गर्दछ।
उनी भन्छन कि यो महत्वपूर्ण छ कि हामीले यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि खोज परिणाममा श्रेणीकरण गर्न धेरै कारकहरू प्रयोग गरिन्छ किनकि यसले प्रत्येक खोजी क्वेरीका लागि कुन वेबसाइट सबैभन्दा प्रासंगिक हो भनेर बुझ्ने प्रयास गर्छ। यदि पृष्ठ केही सन्दर्भमा धेरै प्रासंगिक छ, यो अझै पनि SERP परिणाममा चित्रित हुन सक्छ, योसँग खराब प्रयोगकर्ता अनुभव भएता पनि। कहिलेकाँही, यी वेबसाइटहरू उच्च देखाइन्छ।
यसले हामीलाई यो तथ्यलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ कि गुगलले अझै पनि खोजी परिणामहरूमा साइट रैंक गर्दछ किनभने यो त्यो हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले खोजी गरिरहेका थिए। यो प्राथमिकताहरूको कुरा हो। यदि खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूले खराब यूएक्सको बावजुद वेबसाइट प्रासंगिक फेला पार्दछन्, तब गुगललाई यसको श्रेणीकरण बाहेक अरू विकल्प छैन।
त्यसोभए, किनकी पृष्ठसँग धेरै विज्ञापनहरू छन् भन्दैमा वेबसाइट स्वचालित रूपमा कालोसूचीमा राखिनेछ वा SERP को अन्तिम पृष्ठमा सारिनेछ। जबसम्म प्रयोगकर्ताहरू आफूले चाहेको कुरा पाउँछन्, गुगल अन्धा आँखा लिन इच्छुक छ।
धेरै विज्ञापनका साथ वेबसाईटहरूमा गुगलको प्रतिक्रिया
सुरक्षित हुनको लागि, तपाइँ आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापनको संख्या औसतमा राख्नुपर्दछ। जे होस्, यदि तपाईंसँग धेरै नै छन् भने, यो कुनै वास्तविक कारण छैन जुन तपाईं گھर्नु पर्छ। त्यो किनभने गुगलले कम प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि विरलै वेबसाइटहरू हटाउँछ।
उत्तम विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईंको साइटको यूएक्स जति डरलाग्दो छ, गुगलले तपाईंको वेबसाइटलाई यसको अनुक्रमणिका लगबाट हटाउँदैन। यदि त्यो हुनुपर्दछ भने, यो सम्भवतः कारकहरूको संयोजन हो र यूएक्स मात्र होईन। जब सम्म तपाईंको साइटले केहि प्रस्ताव गर्दछ, तपाईं एकदम सुरक्षित महसुस गर्नु पर्छ। गुगल द्वारा मैन्युअल हटाउने प्राय: साइटहरूमा प्रदर्शन गरिन्छ जुन गुगलका प्रयोगकर्ताहरू वा वेबसाइटहरूमा अप्रासंगिक हुन्छ जुन विशेष कुराको प्रस्ताव गर्दैन।
गुगलको मुलर विवरण दिन्छ
मुलरले वर्णन गर्दछ कि गुगललाई यो मैन्युअल रूपमा जान र यस सर्चबाट वेबसाइटलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न अत्यन्त विरलै छ, यो पक्का गर्दै कि यो कुनै पनि खोज क्वेरीको लागि कहिले देखा पर्दैन। प्रायः यस्ता चरम सजायहरू विशेष अवस्थामा दिइन्छ जहाँ सम्पूर्ण वेबसाइट अप्रासंगिक हुन्छ। वेबसाइटको कल्पना गर्नुहोस् जुन वेबसाइट वा त्यसको मूल्यको बारेमा अनौंठो केहि बाँकी वेबबाट सामग्री स्क्र्याप गर्दछ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, वेबस्पाम टोलीलाई वेबसाइट जाँच गर्न बोलाउँदछ र यदि यो साँच्चिकै कुनै मूल्यवानि स्प्याम साइट हो भने न्याय गर्नको लागि।
यदि त्यस्ता वेबसाइटहरूलाई "दोषी" ठहराइन्छ भने तिनीहरू गुगलको अनुक्रमणिकाबाट हटाइनेछ। खराब यूएक्सको साथ वेबसाइटहरूका लागि, गुगलले अझै यसलाई देखाउन सक्छ, र केहि अवस्थाहरूमा अन्य कारकहरू SERP मा यसको स्तर निर्धारण गर्न आउन सक्छन्।
मुलर यस विषय मा आफ्नो व्यक्तिगत राय थपे। उसको विचारमा यो महत्त्वपूर्ण छ कि खराब यूएक्स भएका वेबसाइटहरू खोज परिणामहरूमा राख्नुपर्छ। वेबसाइटहरु नेभिगेट गर्न वा एक हात प्राप्त गर्न गाह्रो घटनाहरु को वर्णन गरेर उनले आफ्नो राय वर्णन गर्दछ किनकि त्यस्ता वेबसाइटहरूका मालिकलाई राम्रोसँग थाहा छैन।
प्राय: जसो वेबसाइटहरू प्रयोग गर्न यी गाह्रोहरू वैध व्यवसायको स्वामित्वमा हुन्छन्, जसले गुगलले किन यो प्रतिबन्धित हथौड़ा प्रयोग गर्न द्रुत छैन भनेर वर्णन गर्दछ। यी गरीब यूएक्स वेबसाईटहरू महत्त्वपूर्ण छ किनकि उनीहरू मानिसहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटमा उनीहरूले के गर्नुपर्दछ भनेर सिकाउन सक्छन्। हामीलाई के महत्त्वपूर्ण छ सबै विवरणहरू थाहा छैन, त्यसैले हामीसँग यी नराम्रो वेबसाइटहरूबाट सिक्ने अवसर छ। हामी ती वेबसाईटहरू कत्ति खराब छन् भनेर मूल्या in्कनमा पनि प्रयोग गर्न सक्दछौं। के तिनीहरू ब्यवस्थापनयोग्य छन् वा अत्यन्त खराब? के तिनीहरू कहिलेकाँही प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा हामीले सबै चीज फेरि गर्नुपर्दछ?
अन्तमा, ती धेरै अनौंठो चीजहरू गरेर समाप्त हुन्छन्, र यी वेबसाईटहरू सबप्टिमल हुन्छन्। विज्ञको रूपमा, यसले हामीलाई "यो गर्ने उत्तम तरिका छैन भन्ने जस्ता कुरा भन्न अनुमति दिँदछ, यो वेबमास्टर्स दिशानिर्देशहरूको बिरूद्ध कुनै हो"।
खराब यूएक्सको साथ यी कम्पनीहरूले उनीहरूका धेरै विज्ञापनहरू छन् भनेर याद गर्नु हुँदैन, र तिनीहरू वैध व्यवसाय हुन सक्छन्। त्यस्ता केसहरूमा, हामी सहमत छौं कि त्यस्ता वेबसाइटहरू SERP मा देखाइरहनु पर्छ किनकि यो पूर्णतया अप्रासंगिक छैन, र उनीहरूको वेबसाइट त्यो तरीकाले हुन सक्छ किनकि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छैन।
तपाइँको वेबसाइट मा धेरै विज्ञापनहरू हुनुका अरू धेरै बेफाइदाहरू छन्
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, यसले तपाईंको वेबसाइटको लोड गतिलाई असर गर्न सक्छ।
विज्ञापन सामान्यतया वेबसाइटमा लोड हुने पहिलो चीजहरू हुन्छन् किनकि उनीहरूलाई थोरै ब्यान्डविथको आवश्यक पर्दछ। जे होस्, तिनीहरू पृष्ठ लोड गर्दा प्रासंगिक सामग्री कभर गर्न। त्यसोभए यदि प्रयोगकर्ताले विज्ञापन दिनको लागि केहि अधिक सेकेन्ड पर्खनुपर्‍यो भने, तिनीहरूले साईट छाड्ने सम्भावना छ।
धेरै विज्ञापनहरू भएको तपाईंको वेबसाइट स्प्याम जस्तो देखिन्छ।
कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईं उत्पादनहरू किन्नको लागि स्टोरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो वेबसाइटमा, कुनै विज्ञापनहरू छैनन्, सिधा ब्यापारको लागि। दोस्रो, यद्यपि धेरै विज्ञापनहरू छन् जुन तपाईंको खोजी क्वेरीसँग सम्बन्धित छैन। तपाई कुनबाट किन्नु हुन्छ? अवश्य पनि, पहिलो किनकि यो अधिक व्यावसायिक देखिन्छ। स्प्यामरहरू उनीहरूको वेबसाइटहरूमा विज्ञापन भण्डार गर्ने मन पराउँछन् किनकि उनीहरू सकेसम्म धेरै पैसा कमाउन चाहन्छन्। यसले सबैलाई विश्वास गरेको छ कि एक पटक वेबपृष्ठ एक पटकमा तीन भन्दा बढि विज्ञापन, त्यहाँ केहि माछालु छ।
तपाइँको साइट मा धेरै विज्ञापनहरू बस खराब छ किनकि यसले तपाइँको पाठकहरूलाई बढी दबाब दिन्छ। धेरै चोटि, तपाइँले एक वेबसाइट बन्द गर्नुपर्‍यो किनभने हरेक क्लिकको साथ नयाँ पप अप आउँदछ। अब बाहेक त्यहाँ अरू विकल्प छैन, तपाईं SERP मा जान हिचकिचाउनु हुन्न।
तपाइँको वेबसाइटमा धेरै विज्ञापनहरू छन् जब तपाइँका ग्राहकहरूले व्यवहार गर्दछन् ठीक त्यस्तै हो। यो असह्य एक वेबसाइट को उपयोग बनाउँछ। अब गुगलले तपाईलाई सजाय नदिन सक्छ, तर तपाईको ग्राहकहरु लाई राम्रो विश्वास हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्ना श्रोताहरूलाई प्रभाव पार्नुहोस् ताकि तिनीहरू फर्केर आउनेछन् वा वरिपरि रहनेछन्। कोही पनि उनीहरूको पठन वा किनमेल अनुभव रोक्न चाहँदैन।
दिनु Semalt कल गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईंको वेबसाइटलाई यसको गौरव दिनहरूमा लैजानुहोस्।